Faah faahin ku saabsan Qarax uu ku dhaawacmay Xildhibaanka laga soo doorto Deg. Kamkunji oo ka dhacay Islii
Faah faahin ku saabsan Qarax uu ku dhaawacmay Xildhibaanka laga soo doorto Deg. Kamkunji oo ka dhacay Islii.
Qarax uu ku dhaawacmay xildhibaan Yuusuf Xasan oo laga soo doorto degaanka Kamkunji ayaa xalay waxa uu ka dhacay Masjidka Al-Hidaaya ee ku yaala xaafada Islii ee Soomaalida ay degto.
Inta la xaqiijiyay qaraxa ayaa waxaa ku geeriyootay shan ruux oo shacab ah 15-na waa ku dhaawacantay oo uu ku jira xildhibaan Yuus iyo mid kamid ah ilaaladiisa, waxaana qaraxaasi Booliska Kenya Dhabarka ay u saareen kooxda Al-shabaab ee dhibaatada ka wada Geeska Afrika.
Dhaawaca Xildhibaanka ayaa la dhigay Isbitaalka Aga Khan, waxaana lugtiisa midig la sheegay inuu ka jabay, halka lugta kalena ay tirir gashay, sidoo kale mid ka mid ah ilaaladiisa ayaa dhaawacmay, inkastoo uu fudud yahay.
Xildhibaan Yuusuf Xasan ayaa u ololeyn jiray Soomaalida, isagoo si aad ah uga soo horjeeday in la dhibaateeyo ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan xaafada Islii, waxaana uu cambaareyn jiray qaraxyada iyo weerarada ka dhaca xaafadaas.
Booliska Dalka Kenya ayaa dusha u saaray qaraxa lagu bartilmaameedsaday xildhibaanka Soomaliga ah ee laga soo doorto degmada Kamkunji Yuusuf Hasan kooxda Al-shabaab.
Ma jirto ilaa iyo hada cid sheegatay masuuliyada qaraxaasi,waxaana xaafada Islii ciidamada amaanka ay ka wadaan baaritaano ay ku baadigoobayaan cidii ka danbeysay qaraxa.
Qaraxyada ka dhaca xaafada magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Islii ayaa saameynta ugu balaaran waxa uu ku yeeshaa dadka Soomaalida ah, waxaana jira in marka ay dhacaan qaraxyada ay dhibaatooyin kala kulmaan Soomaalida Askarta iyo shcabka Kenyaanka ah.